33 macdan-qode oo la soo saaray - BBC News Somali
33 macdan-qode oo la soo saaray
12 Oktoobar 2010
Farxad iyo reyn reyn ayaa ka jirta goobta macdanta iyo dahabka laga qodo ee San Jose ee ku taalla waddanka Chile, halkaasi oo ay socoto badbaadada 33 macdan qodayaal dhulka hoostiisa ku jiray muddo 69 maalmood.
33 qof ee ilaa hadda la soo saaray ayaa u muuqda in caafimaadkoodu wanaagsan yahay.
Helicoptero ayaa bilaabay inay u daad gureeyaan si caafimaadkooda loo hubiyo isbitaal u dhaw goobta oo ku yaalla magaalada Copiapo.
Farxad iyo sacab ayaa bilaabatay markii la soo saaray macdan qodihii ugu horeeyay Florencio Avalalos
Kooxda badbaadinta waxaa ka mid ah 10 qof oo ka tirsan sharikadda qaranka ee macdanta copper ee dalka Chile, Codelco, labo khabiir oo ka tirsan badbaadinta macdan qodayaasha ee degaanka la joogo, iyo saddex ciidanka badda ee dalka Chile ee sida dhakhaatiirta u tababaran.
Diyaargarowgii ugu dambeeyay ayaa socda laakiin qalabka dadka lagu soo qaadayo ayaa dhowr jeer la tijaabinayaa kahor inta aan hal qofna lagu soo qaadin. marka ugu horreysa qalabka oo maran ayaa godka lagu ridayaa kaddibna wax culays leh ayaa la saarayaa qalabka, kaddibna qof ayaa lagu soo qaadayaa.
Qof caafimaadka ka socda ayaa loo dirayaa inuu eego raggaas una qaybiyo saddex qaybood oo kala ah: kuwa aadka u yaqaan farsamada,, kuwa ugu liita xagga farsamada iyo shakhsiyaadka ugu adkaysiga badan xagga dabeecadda.
Dadka wax badbaadinaya waxay doonayaan inay qaabkaas u soo bixiyaan raggaas.
Ku noqo baalkii sawirka uu ku yaalay
Macdan qodayaasha waxaa lagu soo qaadayaa qalab iyaga loogu talo galay oo khafiif ah, dhar aanay biyuhu ka gudbi karin, iyo muraayado badbaadada loogu talo galay. waxay kaloo xiranayaan suun lagu ogaanayo astaamaha noloshooda marka dibadda loo soo saaro.
Waxay xiran doonaan weji-gasho yar oo ay ka helayaan neefta oxygen waxayna madaxa gashanayaan qalab wax algu dhegaysto si ay joogto ula xiriiraan dadka dibadda jooga.
Haddii uu qalabka wax lagu soo qaadayo uu shaqayn waayo, raggu waxay awood u yeelan doonaan inay sii daayaan qalab kale oo dib ugu celinaya halkii hoose ee godkii laga soo qaaday.
Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in aan la suuxin doonin ragga la soo bixinayo sidaasi darteed waxay la xiriiri karaan kooxda badbaadinaysa.
Marka dibadda loo soo saaro, macdan qodayaasha waxaa loo qaadayaa meel uu yaallo weel yar oo ku dhow halka qalabka lagu soo qaaday uu fariisanayo. meeshaas, dhaqtar ayaa ku eegaya inay wax dhibaato caafimaad ah oo weyn qabaan iyo in kale.
Haddii xaalad degdeg ah ay timaad, waxaa dayuurad loogu qaadi doonaa isbitaalka ugu dhow ee magaalada Copiapo. saddex helicopter ayaa diyaar ku ah godka ay raggu ku jiraan.
From the triage area, the men will be taken through a 50m corridor to the field hospital or stabilisation area, where they will be allowed to spend two minutes with one or two family members.
Macdan qodayaasha waxaa laba saac ay joogi doonaan Isbitaal ku yaalla goobta, ama meel deggan.
Dhibaatada ugu badan ee heysata waa xagga makhaarka. Laakiin dhakhaatiir waxa sidoo kale ay eegi doonaan Vitamin D, si wax looga qabto saameynta bilo aanay qorax arkin.
Waxaa sidoo kale la baari doonaa ilkaha, waxaana halkan sidoo kale lagu siin doonaa talo maskax ahaan.
Waxaa la dhigi doonaa halkaasi 34 konteenar, isbitaalka iyo goobta nasashada oo ay kula kulmi doonaan qoysaskooda.
Meesha laga dejinayo, raggaasi waxay mari doonaan bannaan 50 mitir ah oo tegaya isbitaalka goobta ama meel lagu xasilinayo, halkaas oo muddo labo daqiiqo ah ay kula qaadan doonaan qof ama labo qoysaskooda ka tirsan.
Dib u midaynta qoysaska
Kadib marka lagu baaro isbitaalka goobta ku yaal, macdan qodayaasha waxaa loo oggolaan doonaa inay goobta nasashada tagaan oo kuraas iyo miisas yaaliin, waxaa loo keeni doonaa xubnaha ugu dhaw ee qoysaskooda.
Tirada halkii macdan qode loo oggol yahay waa laba ka tirsan qoyskiisa.
Dr James Thompson, oo ka tirsan University College London, ayaa sheegay in qoysasku maskax ahaan u fiicneyn dad muddo dheer ku jiray god, oo ay u wanaagsan tahay inay dad yar la kulmaan intii hal mar qof walba u arki lahaa.
Goobta qoysasku joogaan, waxaa looga qaadi doonaa helicopter oo la geynayo meel militeri oo ku taal Copiapo, oo 40km u jirta.
Halkan waxa ku yaalla isbitaalka gobolka, halkaasi oo Dhakhaatiirta ay isha ku heyn doonaan ugu yaraan 48 saac.
Haddii loo arko inay caafimaad qabaad 48 kadib, waxa ay la midoobi doonaan qoysaskooda, haddii ay doonayaana waxaa la sii siin karaa tallo maskaxeed.